Nhau - Ichave mutsauko wehutachiona hwekorona
Utachiona hweNewvel Corona hwakataurwa kuEngland, South Africa neNigeria kubva Zvita. Nyika zhinji pasi rose dzakapindura nekukurumidza, kusanganisira kurambidza ndege kubva kuUK neSouth Africa, nepo Japan yakazivisa kuti ichamisa kubvumidzwa kwevatorwa kutanga Muvhuro.
Sekureva kwenhamba dzakaburitswa neJohns Hopkins University kuUS, huwandu hwezviitiko zveCOVID-19 zvakapfuura mamirioni makumi masere uye huwandu hwevakafa hwakapfuura mamirioni 1.75 kubva panguva yekutanga Svondo Beijing nguva.
Hazvishamise kuti hutachiona hweCorona hwakachinja, sezvo hutachiona hweRNA kwahwo huri nekukurumidza kuchinjika chiyero. Novel Corona hutachiona inonyatsogadzikana kupfuura mamwe maRNA hutachiona senge furuwenza hutachiona. Novel Corona hutachiona hunotenderera zvishoma nezvishoma kupfuura hutachiona hwefuruwenza, sekureva kwemusayendisiti mukuru weWHO Sumiya Swaminathan.
Novel Corona hutachiona hutachiona hwatove hwataurwa. Muna Kukadzi, semuenzaniso, vaongorori vakaona inoverengeka yehutachiona hweCorona ine D614G mutation iyo yaive ichitenderera zvakanyanya muEurope neAmerica. Zvimwe zvidzidzo zvakaona kuti hutachiona neD614G mutation hwunowirirana.
Kunyangwe paine huwandu hweshanduko kubva muutachiona kubvira kutanga kwe COVID-19 kubuda, hapana shanduko inozivikanwa, kusanganisira iyo yekuUK, yakave nesimba rakakura pamushonga, kurapwa, bvunzo kana majekiseni, akadaro nyanzvi yeWHO Chitatu.
Ndokumbirawo ubate nesu kana iwe uchida COVID-19 antigen test kadhi.